Waxay u bixisay kellideeda – wayna guursatay! | Radio Himilo
Home / MAQAALO / Waxay u bixisay kellideeda – wayna guursatay!
Muqdisho – Waxa aan ku tilmaami karaa ficilkii ugu deeqsinimada iyo naxariista badnaa damiirka bani’aadamka oo ay adag tahay in badan oo naga mid ah in ay sameeyaan xattaa haddii aan leenahay damiir naxariiseed oo lamid ah kan Sagal, waxa ayna dheer tahay geesinimada iyo dhiiranaanta oo ah wax loo dhasho.
Kala xiriir: farriin-danabeed; mahat335@gmail.com
Next: Report: Real Madrid oo wada-hadal heshiis kordhin ah kula jirta Marco Asensio.